Disclaimer | Orinasa Mpampanoa lalàna
VAKIO TSARA ITY FIfanarahana ITY. IO FETIN'NY SERVIS IO dia mamaritra ny fepetra izay omen'i AL OBAIDLI & AL ZAROONI SERVIS ARA-DALANA amin'ny alàlan'ny tranokalany. WWW.LAWYERSUAE.COM (avy eo dia antsoina ato amin'ity antontan-taratasy ity hoe "AL OBAIDLI & AL ZAROONI" "MPANJAKANA Emirà Arabo Mitambatra" "Isika," "Isika,")
AMIN'NY FIDIRANA NA FAMPIASANA NY SERVIS dia manaiky ho voafatotry ny fepetran'ny serivisy voalaza etsy ambany ianao. RAHA TSY TE HO FOTOTRA AMIN'IREO FEPETRA SERVIS IREO IANAO, dia TSY METY HIDITRA NA HAMPIASA NY SERVIS. ITY SITE WEBSITE ITY DIA TANIN'NY AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT.
AZO ATAO FA NY AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS dia AFAKA MANOVA ITY FIfanarahana ity amin'ny fotoana rehetra, ary ny fanovana toy izany dia hahomby avy hatrany aorian'ny fandefasana ny fifanarahana noovaina ao amin'ny tranokala. EKENA IANAO NY HAMERINA ISAN-DALANA NY FIfanarahana MBA HAHAFANTARANA NY FANOVANA IZANY ARY NY FISIANANAO NA FAMPIASANA NY SERVIS dia horaisinao ho fanekem-pihavanana.
LawyersUAE.com dia sehatra an-tserasera ho an'ny fampahalalana momba ny lalàna sy ny fanampiana tena. Ny fampahalalana nomenay miaraka amin'ny votoaty ao amin'ny tranokalanay mifandraika amin'ny raharaha ara-dalàna ("Fampahafantarana ara-dalàna") dia omena ho an'ny tenanao manokana ary tsy torohevitra ara-dalàna. Tsy mijery izay vaovao omenao anay izahay ho an'ny fahamarinan'ny lalàna na ny fahafenoana, tsy manao tsoa-kevitra ara-dalàna, manome hevitra momba ny lasitra nofidinao, na mampihatra ny lalàna amin'ny zava-misy iainanao.
Tsy Biraon'ny Lalàna izahay ary ny fampiasanao an'ity serivisy ity dia tsy mahaforona fifandraisana mpisolovava sy mpanjifa. Takatrao fa ny mpisolovava nahazo alalana ihany no afaka manome torohevitra ara-dalàna. Na i Al Obaidli & Al Zarooni na izay fampahalalana ara-dalàna nomen'ny LawyersUAE.com dia tsy solon'ny toro-hevitra ara-dalàna avy amin'ny mpisolovava mahafeno fepetra nahazo alalana hanao fampiharana amin'ny sehatra mety.
Raha tsy asiana mpisolovava amin'ny fomba hafa ianao, ao anatin'izany ny mpisolovava voatanisa dia misolo tena ny tenanao amin'ny raharaha ara-dalàna izay ataonao amin'ny alàlan'ny serivisy eto aminay.
LawyersUAE.com na Lawyers UAE dia tsy "Service Referral Lawyer". Ny lisitry ny mpisolovava navoaka tao amin'ny tranokalanay dia omena maimaim-poana ho an'ny daholobe ary natao ho an'ny fampahafantarana fotsiny. Ny LawyersUAE.com dia tsy manohana na manolotra mpisolovava ary tsy manome antoka momba ny kalitao na ny fahaizan'ny mpisolovava rehetra.
NY INDRINDRA MAMPIDY ANY ATTORNEYS
Rehefa mampiasa ny Plateforme ianao dia hanana fahafahana hifandray amin'ny mpisolovava iray ("Mpisolovava voatanisa"). Ny mpisolovava voatanisa dia tsy mpiasa na mpiasan'ny LawyersUAE.com na Lawyers UAE. Ireo mpisolovava voatanisa dia mpiantoka tsy miankina izay mitondra ny fanaony ara-dalàna ary nanaiky hanome valiny an-tserasera, fifampidinihana voafetra, na serivisy ara-dalàna hafa ho an'ireo mpampiasa ny LawyersUAE.com na ny Lawyers UAE. TSY ilaina ny mifandray amin'ny mpisolovava voatanisa amin'ny alàlan'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants. Na izany aza, raha misafidy ny hifandray amin'ny mpisolovava voatanisa ianao amin'ny alàlan'ny mpisolovava UAE, azafady mariho ireto manaraka ireto (a) Rehefa mifandray amin'ny mpisolovava voatanisa amin'ny alàlan'ny mpisolovava UAE ianao, dia mety hanome anao fifampidinihana voalohany, famerenana ara-dalàna ny taratasinao na antontan-taratasy ianao. , na valin'ny fanontanianao momba ny lalàna. Mariho fa ny fifaneraserana toy izany dia natao ho fanombohana amin'ny fiatrehana raharaha ara-dalàna na famahana ireo fanontaniana fototra momba ny lalàna ary ny fifandraisan'ny mpisolovava-mpanjifa miforona mandritra io fifampiraharahana io dia eo anelanelanao sy ny Mpisolovava voatanisa (b) Rehefa ianao mifandraisa amin'ny mpisolovava voatanisa amin'ny alàlan'ny mpisolovava UAE, mety hangataka fampahalalana momba anao sy ny raharahanao ara-dalàna izy mba hamaliana tsara ny fanontanianao. Amin'ny alàlan'ny fampiasanay ny Serivisy dia manaiky ny hizara ny mombamomba anao manokana ianao mba hahazoana torohevitra ara-dalàna amin'ny mpisolovava mangataka sy amin'ny Lawyers UAE. Ny mpisolovava UAE dia hanana fidirana amin'ny fifandraisana rehetra atolotra amin'ny alàlan'ny lampihazo ho an'ny fahatanterahan'ny tanjona sy ny fiantohana ny kalitao (c) Rehefa mifandray amin'ny mpisolovava voatanisa amin'ny alàlan'ny mpisolovava UAE ianao, dia mifehy ny faharetan'ny fifandraisana ianao. Ny fifandraisan'ny mpisolovava-mpanjifa miforona mandritra io fifampiraharahana io dia mety (i) hifarana rehefa tapitra ny fifandraisana amin'ny Mpisolovava Voatanisa, na (ii) hitohy raha te hifandray amin'ny Mpisolovava Voatanisa ianao mba hahazoana tolotra ara-dalàna fanampiny. (d) Raha te hamorona fifandraisana mpisolovava-mpanjifa miaraka amin'ny Mpisolovava voatanisa ianao izay mihoatra ny fampiasanao ny Serivisy, io fifandraisana io dia miankina amin'izay fepetra apetrakao amin'ny mpisolovava resahina. Ireo teny ireo dia TSY tafiditra ao amin'ny Mpisolovava UAE ary, afa-tsy ny fifampiraharahana mialoha ny fihenam-bidy manokana ho an'ny mpikambana, dia tsy mametraka, mifehy na mitaona azy ireo izahay. Ohatra, ny mpisolovava voatanisa dia mety hangataka anao hanao sonia fifanarahana ara-dalàna momba ny sehatry ny asa hataony, ny sandan'ny sampan-draharaha ara-dalàna ataony, ary ny fikarakarana ny fandaniana rehetra azony. (e) Ny mpisolovava voatanisa dia azo omen'ny Mpisolovava UAE ho an'ny serivisy natao ho anao, na izany aza, ny mpisolovava UAE dia tsy mahazo anjara amin'ny saram-pitsarana nangonin'ny mpisolovava rehetra ao amin'ny tambajotranay. Amin'ny toe-javatra rehetra, ny mpisolovava UAE dia tsy hisy fiantraikany na hitsabaka amin'ny fomba rehetra amin'ny fitsarana matihanina tsy miankina amin'ny mpisolovava.
NY MPITORANA SY NY FANDROSOANA NY FIKAROTANAO
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy milaza ho tompon'ny antontan-taratasy izay noforoninao na ampidirinao ary tehirizina amin'ny alàlan'ny Serivisy ("Documents"). Manome alalana an'i Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Mpisolovava UAE ianao hampiasa ny antontan-taratasinao mifandraika amin'ny fanomezana serivisy anao.
Manaiky sy manaiky ianao fa ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia afaka mitahiry ireo Taratasy ireo ary manambara azy ireo raha takian'ny lalàna na amin'ny finoana tsara fa ilaina ny fitahirizana na fampahafantarana toy izany mba hanatanterahana izay rehetra amin'ireto manaraka ireto: (1) hanaraka ny dingana ara-dalàna, ny lalàna manan-kery na ny fangatahan'ny governemanta; (2) hampihatra ireo fepetra ireo; (3) mamaly ny filazana fa misy votoaty manitsakitsaka ny zon'ny antoko fahatelo; na (4) mba hiarovana ny zo, fananana, na fiarovana manokana an'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE, ireo mpampiasa azy ary ny vahoaka. Takatrao fa ny fanodinana ara-teknika sy ny fandefasana ny Serivisy, anisan'izany ny atiny, dia mety ahitana fampitana amin'ny tambajotra isan-karazany sy fanovana mba hifanaraka sy hifanaraka amin'ny fepetra ara-teknika amin'ny tambajotra na fitaovana mampifandray. Manaiky ianao fa ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy manana andraikitra na andraikitra amin'ny famafana na tsy fitehirizana votoaty voatahiry na nampidirin'ny serivisy.
Amin'ny famoronana kaonty dia manaiky ianao fa afaka mahazo fifandraisana mailaka avy amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE, toy ny gazetiboky, tolotra manokana, fampahatsiahivana ary fanavaozana. Takatrao ihany koa fa afaka manala ny tenanao amin'ireo fifandraisana ireo ianao amin'ny alàlan'ny fipihana ny rohy "Unsubscribe" eo amin'ny tongotry ny mailaka tena izy.
Ny Sampan-draharaha eto aminay dia misy maro an'isa antsoina hoe "Serivisy Serasera." Anisan'izany ny serivisy toy ny kofehy fanehoan-kevitra, lahatsoratra bilaogy, vokatra fanontaniana sy valiny, forum fifanakalozana serivisy ho an'ny mpanjifa, ary serivisy hafatra hafa. Manaiky ianao fa hampiasa ny serivisy serasera mba handefasana, handefasana ary handefasana hafatra na fitaovana sahaza sy mifandraika amin'ny serivisy serasera manokana. Rehefa mampiasa Serivisy Serasera ianao dia manaiky fa tsy hanao an'ireto manaraka ireto:
Manaratsy, manararaotra, manelingelina, mikambana, mandrahona na raha tsy manitsakitsaka ny zon'ny hafa hafa.
Mamoaka, mandefa, mampiditra, manaparitaka na mizara anarana na fitaovana, na fampahalalana izay heverina ho tsy mendrika, tsy manala baraka, manala baraka, tsy manelingelina, manambaka, tsy manaja na tsy manara-dalàna.
Mamorona fitadiavana diso, misolo tena ny tenanao tahaka ny olon-kafa, na manao sonia ny fifanarahana amin'ny olon-kafa na amin'ny anaran'ny olon-kafa, na mamitaka na mamafa na mametraka ao anaty rakitra nampidirina misy toetra na fampahalalana lehibe.
Alefaso ny rakitra izay misy rindrambaiko na fitaovana hafa arovana amin'ny alàlan'ny lalàna manan-tsaina na an'ny zon'ny fiainana manokana na ampahibemaso raha tsy rehefa
tomponao na mifehy ny zo ilaina, na
efa nahazo ny fanekena ilaina rehetra hanaovana izany ianao.
Ampidiro ireo rakitra efa simba, fisie izay misy viriosy, na fisie hafa mety hanimba ny fiasan'ny solo-sain'ny hafa.
Manaova dokam-barotra, manolotra hamidy, na hanolotra hividy na inona na inona ho an'ny raharaham-barotra afa-tsy amin'ny fetra voafetra manokana izay avelan'ny serivisy fifandraisana manokana.
Famerana na hampiato ny mpampiasa hafa tsy hampiasa sy hankafy ny serivisy serasera.
Ny fijinjana na raha tsy izany manangona fampahalalana manokana momba ny hafa, tsy eken'izy ireo.
Manitsakitsaka ny fitsipi-pitondran-tena na ny torolàlana hafa, izay azo ampiharina amin'ny serivisy serasera manokana.
Manitsakitsaka ireo lalàna na fitsipika mifandraika amin'izany.
Na dia tsy manana adidy hanara-maso ny Sampan-draharahan'ny Fifandraisana aza ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE, dia manana zo izahay, araka ny fanapahan-kevitray manokana, handinika sy hanaisotra ireo fitaovana navoaka tao amin'ny Serivisy Fifandraisana, manontolo na ampahany. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia manana zo hamoaka izay fitaovana alefa, fampahalalana na hetsika araka izay ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny lalàna manan-kery, ny fitsipika, ny dingana ara-dalàna, na ny fangatahan'ny governemanta.
TSY MISY AZONAO VONINAHITRA NA MANGOTSY FOTOTRA AZY
Afaka mampiasa ny Serivisy ihany ianao raha tsy mifanohitra na mandika ny lalàn'ny faritra misy anao. Ny fisian'ny Serivisy ao amin'ny faritra misy anao dia tsy fanasana na tolotra avy amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE mba hidirana na hampiasa ny tranokalanay na serivisy. Amin'ny alàlan'ny fampiasanay ny Serivisy dia manaiky ianao fa tsy mandika lalàna manan-kery eo amin'ny fari-piadidianao ny fampiasanao na ny fidirana amin'ny Serivisy anao na ny olona rehetra ao amin'ny fianakavianao. Mba hampiharana an'io fepetra io, Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia manana zo handà tsy ho mpikambana, na hampiato na hampiato ny kaontinao avy hatrany ary tsy misy fampandrenesana mialoha amin'ny fanapahan-kevitray manokana.
Ireto manaraka ireto dia voarara manokana na voarara:
Fampiasana mifandraika amin'ny raharaha ara-dalàna izay tsy misy dikany, tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna, araka ny fanapahan-kevitry ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na ireo mpisolovava UAE na ny mpisolovava voatanisa amin'ny fanapahan-keviny manokana;
Ampiasao mifandray amin'ny raharaha ara-dalàna misy heloka bevava lazaina ho mahery setra;
Ampiasao mifandraika amin'ny raharaha ara-dalàna izay misy ny lalàna mifehy any ivelan'ny Emirà Arabo Mitambatra na ireo faritra misy azy;
Ampiasao mifandraika amin'ny raharaha ara-dalàna misy anao ankehitriny na amin'ny maha-mpisolovava anao torohevitra araka ny lalàna.
Ampiasao mifandraika amin'ny raharaha ara-dalàna izay, araka ny faritanin'ny mpisolovava voatanisa ao amin'ny fahendreny tokana, dia tsy mendrika ny mendrika hahazo ny fikatsahana, na izany dia nanangana fotoana be loatra na tsy mitombina tsy misy fiovana;
Ampiasao mifandray amin'ny raharaha ara-dalàna izay misy ankolafy mpisolovava voatanisa na ankolaka, ankoatra ny toro-hevitrao;
Ampiasaina mifandraika amin'ny raharaha ara-dalàna rehetra izay mahakasika mivantana na ankolaka Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE na ireo mpiara-miasa aminy, tale, mpiasa, mpiasa, na Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE mpanome tolotra; na
Ampiasao mifandray amin'ny raharaha ara-dalàna izay ananan'ny Sponsor Program anao tombontsoa ratsy, na izay misy tale, manamboninahitra, mpiasa na mpiasa amin'izany manana tombontsoa ratsy. Ho an'ny tanjon'ity fepetra ity, ny "Sponsor Program" dia midika hoe orinasa, fikambanana na fikambanana izay mividy na manolotra amin'ny anaran'ny mpikambana na mpiasa ao aminy, Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE drafitra ara-dalàna amin'ny alàlan'ny fantsona ambongadiny, antsinjarany. fantsona na hafa. Azafady, jereo ny Sponsor Program anao raha mila fameperana fanampiny.
Azonao atao ny tsy mijirika, "manakisaka" na "mandady" Rocketlawyer.com na mivantana na amin'ny alàlan'ny mpanelanelana toy ny hala, robots, crawlers, scrapers, framing, iframes na RSS feeds, na raha tsy izany dia miditra na manandrana miditra amin'ny fampahalalana rehetra Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy ninia nanome anao tao amin'ny tranokalany tamin'ny alàlan'ny famandrihana novidina. Ny fampiasanao ny tranokalan'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE dia tsy manome alalana anao hivarotra indray izay Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na votoaty Lawyers UAE raha tsy misy fanekena an-tsoratra mialoha avy amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Mpanolo-tsaina ara-dalàna na mpisolovava UAE.
Miankina amin'ny fanarahanao ireo fepetra ireo, dia omena anao ny fahazoan-dàlana tsy manokana, voafetra, tsy azo afindra, azo esorina hampiasa ny Serivisy araka izay kasainay hampiasaina. Amin'ny maha mpampiasa Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Mpisolovava UAE voasoratra anarana, dia nahazo alalana hitazona, ho an'ny firaketanao manokana, kopia elektronika na ara-batana ny antontan-taratasy noforoninao tao amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Consultants na Mpisolovava. UAE. Tsy azonao atao ny mandika ny votoatin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na ny Lawyers UAE na fifanarahana hampiasaina na amidy ivelan'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE. Izay zo tsy omena mazava amin'ireo fepetra ireo dia natokana ho an'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE.
Rehefa mamindra votoaty mpampiasa amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE ianao dia manome an'i Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE sy ireo mpiara-dia aminy ho tsy manam-paharoa, tsy misy rohim-panjakana, maharitra, tsy azo ivalozana ary azo sublicensable tanteraka. zo hampiasa, hamokatra, hanova, hampifanaraka, hamoaka, handika, hamorona sangan'asa avy amin'ny, hizara, hanatanteraka ary hampiseho izay votoaty toy izany, anisan'izany manerana an'izao tontolo izao amin'ny haino aman-jery rehetra. Raha mandefa fanehoan-kevitra na soso-kevitra momba ny Serivisy ianao dia mety hampiasa ny hevitrao na ny soso-kevitrao tsy misy adidy aminao izahay.
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia mitazona ny zo rehetra, anaram-boninahitra ary fahalianana amin'ny serivisy, anisan'izany, tsy misy fetra, lahatsoratra, sary, sary, logos, marika serivisy, zon'ny mpamorona, sary, horonan-tsary, mozika, ary zo rehetra mifandraika amin'ny fananana ara-tsaina. Afa-tsy araka ny voalaza ato amin'ity fifanarahana ity, dia tsy azonao, ary mety tsy mamela ny hafa hanao: mamerina, manova, mandika, manatsara, manambatra, manafoana, mivarotra, fahazoan-dàlana, sublicense, manofa, manofa, mizara, mandika, mampiseho ampahibemaso, mamoaka, mampifanaraka, manitsy na mamorona sanganasa avy amin'ny vokatra sy serivisy rehetra;
Fifandraisana amin'ny antoko fahatelo
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers Emirà Arabo Mitambatra dia mety ahitana rohy mankany amin'ireo loharanon-karena sy orinasan'ny antoko fahatelo ao amin'ny Internet, antsoina eto hoe “rohy” na “Site mifandray.” Ireo rohy ireo dia omena mba hanamora ny fanamorana anao mba hanampiana anao hamantatra sy hahita loharano hafa amin'ny Internet izay mety hahaliana anao. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy manohana ary tsy mifandray ara-dalàna amin'ny antoko fahatelo "tranonkala mifandray". Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy nahazo alalana ara-dalàna hampiasa anarana ara-barotra, marika voasoratra anarana, logo, tombo-kase ofisialy na fitaovana misy zon'ny mpamorona mety hita ao amin'ny rohy.
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy manara-maso, manohana na manara-maso ny votoatin'ny tranokala mifandray. Tafiditra ao anatin'izany, tsy misy fetra, ny rohy hafa ao amin'ny tranokala mifandray, ary izay fanovana na fanavaozana amin'ny tranokala mifandray. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy tompon'andraikitra amin'ny webcasting na amin'ny endrika fampitana hafa azo avy amin'ny tranokala mifandray. Ireo fepetra ireo dia tsy mandrakotra ny fifandraisanao amin'ny tranokala mifandray. Tokony handinika tsara ny fepetra sy fepetra ary ny politika momba ny fiainana manokana amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ianao.
Raha mampiasa serivisy omena amin'ny tranokala mifandray ianao, (a) Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy ho tompon'andraikitra amin'izay mety ho fihetsika na fandaozan'ny antoko fahatelo, anisan'izany ny fidirana na ny fampiasana ny antoko fahatelo. angon'ny mpanjifa ary (b) Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy manome antoka na manohana izay serivisy omen'ny antoko fahatelo.
MITADIAVANA FIKAMBANANA ARY FIVORIANA
Ny fampahalalana azo tamin'ny alàlan'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia tsy tokony hiantehitra amin'ny fanapahan-kevitra manokana na ara-dalàna. Tokony hifandray amin'ny matihanina mety ianao mba hahazoana torohevitra manokana mifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao. Raha fintinina, ny fampiasanao ny Serivisy dia atahoranao manokana.
HATRAMIN'NY FEPETRA AVY AMIN'NY LALANA, AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS SY MPAVERY Emirà Arabo Mitambatra SY NY MPIARA-MIASA AMIN'NY MPANOMPY SY NY MPIRINDRA TSY MANAO TOKONY, NA TSY MISY ARA-TOERANA, NA TSY MISY ATAO, MOMBA NY SERVIS. NY SERVIS dia omena amin'ny "AS IS". ARY FOTOTRA "AO AMIN'NY MISY". TSY ILAINAy mivaingana izay garantiana momba ny fandrantoana, ny maha-mety ho an'ny tanjona manokana, ary ny tsy fanitsakitsahana. TSY TOKONY HIanteherana amin'ny fanapahan-kevitry ny tena manokana, ara-pitsaboana, ara-dalàna, na ara-bola ny fampahalalana SY HEVITRA raisina amin'ny alalan'ny tranokala ary tokony hifampidinika amin'ny matihanina iray mety ianao amin'ny toro-hevitra manokana mifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao.
HATRAMIN'NY FEPETRA ATAOVY AMIN'NY LALANA, TSY MISY HO TANTARA I AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & CONSULTANTS LEGAL ARY MPIVAROTRA Emirà Arabo Mitambatra, ireo mpiara-dia aminy, MPAMALY NA MPIRINDRA AO AMIN'NY OLONA TOKOA, MANOKANA, MISY, SAM-PIRENENA NY FAMPIASANA, NY DATA, NY ORINASA, NA NY TOMBONY, NA IHANY NY TOKONY ARA-DALANA, NA TSY MIARAKA IREO AL OBAIDLI & AL ZAROONI AVOCATS & CONSULTANTS LEGAL ARY MPIVAROTRA Emirà Arabo Mitambatra dia efa nampitandremana ny amin'ny mety hisian'ny fahavoazana toy izany, ary na dia tsy azo atao aza ny fanafoanana. .
AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & LEgal CONSULTANTS ARY MPAVERINA Emirà Arabo Mitambatra dia TSY MANANA ANDRAIKITRA NA ADIANA NA IRAY NA IRAY AMIN'NY SERVIS MAHATONGAVAN'NY MPITONDRA REHETRA IREO MIARAKA NA AMIN'NY SITE SERVICES IREO FAMPANDROSOANA SY NY PROVINCY LOZA NY OLONA
AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS ARY MPAVERINA NY ADIDIN'NY Emirà Arabo Mitambatra amin'ny fitakiana rehetra mifandraika amin'ny SERVIS dia TSY MIHITSY MIHITSY MIHOATRA MIHITRY NY $500 na ny vola aloanao ho an'i AL OBAIDLI ADVO & ALESAROO AMIN'NY AL OBAIDLI ADVO & ALESAROO. NY 12 VOLANA MIALOHA NY SERVIS IZANY.
NY FIVORIANA SY FAHADIANA
Amin'ny anaran'ny tenanao sy ny mpandova anao, ny mpanatanteraka, ny masoivoho, ny solontena ary ny fanendrena anao, afaho tanteraka, mandroaka mandrakizay, ary mitazona ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE, ny Programa Sponsor anao sy ny mpiara-miasa aminy ary ny tompon'andraikitra, mpiasa. , tale sy mpiasa tsy mampidi-doza amin'ny fatiantoka rehetra, fahasimbana, fandaniana, anisan'izany ny saram-pandraharahana ara-drariny, ny zo, ny fitakiana ary ny fihetsika na inona na inona karazana sy ratra (anisan'izany ny fahafatesana) vokatry ny fampiasanao ny serivisy. Manaiky ianao fa nekena an-tsitrapo sy an-tsitrapo ity famoahana ity ary manamafy ianao fa azonao tsara ny zavatra ekenao.
Manaiky ny hanome onitra sy hihazona an'i Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na Lawyers UAE ianao, ny Programan'ny Sponsor anao sy ny mpiara-miasa aminy ary ny manampahefana, ny mpiasa, ny tale ary ny mpiasan'izy ireo tsy mampidi-doza amin'ny fatiantoka, fahavoazana, fandaniana, anisan'izany ny mpisolovava mety. sarany, zo, fitakiana, hetsika na inona na inona ary ratra (anisan'izany ny fahafatesana) vokatry ny fitakian'ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny fampiasanao ny serivisy, ny fanitsakitsahanao ireo fepetra ireo na ny fanitsakitsahanao ny zon'ny hafa.
Ireo fitsipika ireo dia hamehezana ny lalàna ao amin'ny United Arab Emirates.
Ireo fepetra ireo dia mandrafitra ny fifanarahana iray manontolo eo aminao sy ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants na ny Mpisolovava UAE momba ny foto-kevitr'ireo fepetra ireo, ary manolo sy manolo izay fifanarahana teo aloha na miaraka, na fepetra sy fepetra mifandraika amin'ilay lohahevitra. momba ireo fepetra ireo. Ireo fepetra ireo dia tsy mamorona zon'ny mpandray tombony.
FIVORIANA, FANDROSOANA ARY FANDAHORANAANA
Tsy fanafoanana ny zony hanao izany any aoriana ny tsy fanatanterahana ny fepetra. Raha toa ka hita fa tsy azo ampiharina ny fepetra iray, dia mbola manan-kery tanteraka ny fepetra ambiny amin'ny fepetra ary hosoloina fe-potoana azo ampiharina izay maneho ny fikasanay akaiky araka izay azo atao. Tsy azonao atao ny manendry ny zonao amin'ireo fepetra ireo, ary ho foana ny fikasana toy izany. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE dia afaka manome ny zony amin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminy na sampana, na amin'izay mpandimby azy ho tombontsoan'ny orinasa rehetra mifandray amin'ny Serivisy.
Azontsika jerena tsindraindray ireo Karazan'andraikitra ireo ary hamoaka ny dikanteny farany indrindra eo amin'ny tranokalanay. Raha misy fanavaozana mampihena ny zonao, dia ampahafantarinay anao (amin'ny ohatra, ny fandefasana ao amin'ny bilaoginay na ato amin'ity pejy ity). Amin'ny fanohizana ny fampiasana na fidirana ireo serivisy aorian'ny fanombohan'ny fanavaozana dia manaiky ny hofehezin'ireo fepetra nohavaozina ianao.
Raha manana fanontaniana na fanontaniana momba ny fampiasanao an'ity sehatra ity ianao dia azafady mba mifandraisa aminay amin'ny: case@lawyersuae.com na miantso + 971 50 6531334.